Video Editing အကြောင်းလေးတွေ ... - Page3- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ခွေက ဗွီစီဒီလိုမျိုး တစ်ပုဒ်စီလုပ်ချင်တာ ulead ထဲကိုထည့်လိုက်
Ulead ထဲကို တစ်ပုဒ်ချင်းစီထည့်ပြီး အကို ထည့်ချင်တဲ့ effects တွေ ဓါတ်ပုံတွေ အကုန်အားရအောင်ထည့်ပြီး ပြီးဆိုတာနဲ့ အဲဒီ သီချင်းကို အစအဆုံးပြန်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ကျနော်တို့ တစ်ပုဒ်ချင်းစီပဲ ထုတ်မယ်လေ။ တဆက်တည်း မဖြစ်ပါဘူး။ မဆက်ဘဲ တစ်ပုဒ်ချင်စီ လုပ် လုပ်ပြီးတာနဲ့ ထုတ်ကြမယ် ဒီတစ်ပုဒ်ပြီးသွားတာနဲ့ နောက်တစ်ပုဒ်ပေါ့ ...
တန်းလန်းကြီး မဖြစ်ရပါဘူးဗျာ ကျနော်လဲ ဆက်ပြီး ကူညီပေးနေမှာပါ။ ဆက်လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်သွားပါ။ ကျနော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို တစ်ပုဒ်ချင်း စီ လုပ်ပြီးတာနဲ့ Ulead ဖိုင်နဲ့လဲ သိမ်းပါ။ ပြင်စရာ ရှိရင် အလွယ်တကူ ပြန်ပြင်လို့ ရအောင်ပါ။ ပြင်စရာ မရှိတော့ရင် တော့ VCD ဖိုင်နဲ့ လဲ ထုတ်လိုက်ပေါ့။ ulead ဖိုင်နဲ့ သိမ်းထားတာကို တော့ မဖျက်လိုက်ပါနဲ့။ ခွေထုတ်ပြီး ကျေနပ်တော့မှ သာ ဖျက်လိုက်ပါ။ မကျေလည်လို့ ပြင်ချင်ရင် project မရှိတော့ဘဲ ဖြစ်နေမယ်။ နောက်ပြီး တစ်ခု အကြံပေးချင်တာက လုပ်ချင်တာတွေ ကို folder တစ်ခု မှာ တစ်စု တစ်စည်းတည်း သိမ်းထားပြီးမှ ယူသုံးပါ။ မှားဖြတ်မိရင် ဒုက္ခ လေ နောက်ပြီး နေရာပြောင်းလို့ အဲဒီ ဖိုင်ကို Ulead က မသိတော့ရင် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပြီး နေရာလိုက်ရှာပေးနေရရင် အချိန်ပိုကုန်ပြီး စိတ်ရူပ်ရပါတယ်။ အကျင့်လေး လုပ်ခဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ ခွေနာမည်က အချစ်အိမ်လေးတည်ဆောက်မယ် ဆိုရင် အဲဒီ အောက်မှာ song ၊ video ၊ pictures ဆိုပြီး အဆင်ပြေအောင် တစ်စုတစ်စည်း တည်း folder လေးတွေ ထပ်ခွဲ လိုက်ပေါ့ ။ အဲလို လုပ်ထားရင် အရမ်းအဆင်ပြေတယ် ဗျာ။ ဘယ်ချိန်ပြန်လုပ်လုပ်။ အဲတော့ ကျနော် ပြောသလို အားရအောင် တစ်ပုဒ်လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ Share -> Create Video File -> DVD/VCD/SVCD/MPEG -> NTSC VCD ရွေးပြီး ဖိုင်နာမည်ပေး save လိုက်ပါ။ ပြန်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေမပြေပေါ့ ။ အဲလို နည်းနဲ့ တစ်ပုဒ်ချင်း စီ လုပ်ပြီး ulead ဖိုင်အနေနဲ့ရော Vcd ဖိုင်အနေနဲ့ ရော ထုတ်လာလိုက်တာ ၁၀ ပုဒ်ပြည့်သွားပြီး ဆိုပါစို့ ခွေ ရိုက်ရတော့မယ်။ ခွေ ရိုက်တဲ့ soft တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကျနော် ကြိုက်တဲ့ Menu လှလှလေးတွေ ဖန်တီးလို့ ရတဲ့ soft ကို ကျနော် စာမေးပွဲတွေ ပြီးမှ တင်လဲ တင်ပေးပါမယ်။ ရှင်းလဲ ရှင်းပြပေးပါမယ်။ ကျနော် ပြောတာတွေ အရင်လုပ်ထားလိုက်နော် ။ Menu နဲ့ ခွေ burn ဖို့ ကတော့ မကြာမှီလာမည် မျှော် .. ခုလောလောဆယ်တော့ စာကျက်လိုက် အုန်းမယ် စာကူကျက်ပေးရင်တော့ ...
Last edited by bonge; 05-05-2009 at 08:40 PM..
ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, boya, lawliet, paulgyi, thetzin, thurein
ကျွန်တော်တစ်ယောက်ကတော့ vcd စာတန်းထိုးတဲ့ ကိစ္စနဲ့တင်
တိုင်ပတ်နေတာ အခုထိကို မရသေးဘူးဗျို့..
အစ်ကို စာမေးပွဲပြီးရင် ပြန်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်ဗျာ...
bonge, paulgyi, thetzin
ကောင်းလိုက်တာဗျာ... တကယ်တော့ကျွန်တော်က ဒါမျိုး ကို စိတ်ဝင်စားတာ..
အခုတော့ .. ကျေးဇူး ပါပဲဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ pholay83 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by pholay83
ဒါပေမဲ့ ညီပြန်ကြည့်တော့ Ulead save မှာရေ VCD ဖိုင်မှာပါ ဓါတ်ပုံတွေက တစ်ချို့နေရာမှာ
ပုံတွေကတုန်နေတယ် အစကတော့ time line မှာအချိန်ဆွဲထည့်တာများ များသွား
လို့လားဆိုပြီ အဲဒီပုံကိုပြန်ဖျက်လိုက်တယ် ပြီပြန်ထည့်ပြန်တော့လည်းရဘူး တုန်နေတာပဲ
Effect ထည့်တာများ များသွားလို့လား ညီကတော့တစ်ပုံကို zoom Effect တစ်ခုနဲ့ Video Effect တစ်ခု
ထည့်တယ် အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပြောပါဦး နေရာတော်တော်များများမှာ ဓါတ်ပုံတွေကတုန်နေတယ်
ကယ်ပါဦးနော ကော်ဖီတိုက်မယ်နော် ရော့ နှစ်ခွက်သောက် ပြီးရင်ပြောပြနော်
ကော်ဖီ ကောင်းတယ်ဗျ ကျနော်က ကော်ဖီအရမ်းကြိုက်တဲ့ကောင်ဗျ ကျေးဇူး ပုံတွေ တုန်နေတယ် ဆိုတော့ ပုံရဲ့ pixel ကို ပြန်ကြည့်ပေးပါ။ pixel တအားနည်းနေလို့ များလား အကို ထည့်ထားတဲ့ ပုံတွေ ရဲ့ pixel တွေ နည်းနေလား ပြန်စစ်ကြည့်ပေးပါ။ effect ထည့်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ pixel မနိုင်ရင် တုန်တတ်ပါတယ်ဗျာ ... လုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ကျနော်လဲ နောက်ဆိုရင် ဒီထက်ပိုပြီး အချိန်ပေးကူညီနိုင်မှာပါ။ ဆက်လုပ်သွားပါဗျာ အားပေးနေပါတယ်
ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, paulgyi, thetzin
ဟုတ်ကဲ့ ညီကြည့်ပြီးသွားပါပြီ pixel က မနည်းဘူး အစ်ကို Zoom Effect ကြောင့်များလားမသိဘူးနော်
လုပ်လို့မရဘူး ဘယ်လိုမှ ပြီးတော့ ဗွီဒီယို ဖိုင်ကိုတစ်ဖိုင်တွဲပြီးတော့ထည့်ချင်တယ် ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်နေရင်း
နဲ့ တစ်နေရာမှာရပ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ စာတန်းထိုးတာမျိုးလုပ်ချင်တယ် လူတစ်ယောက်ချင်းစီကို နာမည်ထိုးပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလေ .....
screen တစ်ခုမှာPause လိုမျိုး ကိုယ်ပြချင်တဲ့သူကို
ဖန်ဆင်းရှင်, paulgyi, thetzin
အကိုရေ ရပ်ချင်တာများ အဝေးကြီး စဉ်းစားမနေပါနဲ့ဗျာ။ Pause ပေးပြီး ပြလိုက်ပေါ့ဗျာ အပျော်ပါ
pixel မနည်းဘူး Zoom Effect ကို သုံးထားတယ် ဆိုတော့ Zoom Effect ရဲ့ သဘောကိုးက ပုံအကြီးကြီးချဲ့ပြီး တုန်ခနဲ ရောက်လာတာလေ။ တခြား Effect အစားထိုးကြည့်ရင်ရော တုန်လား။ Zoom Effect သုံးလို့ ပဲ ဆိုရင်တော့ သူရဲ့ သဘောကိုးက အဲလိုပဲ ဖြစ်တယ်ဗျ။
အကို လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံအရ ဆိုရင်တော့ Premiere မှာတော့ လွယ်တယ်ဗျ။ Premiere ထဲမှာ လိုချင်တဲ့နေရာ ခဏ Pause ပေးပြီး Image ကို Export ထုတ်ပြီး ပြန်သုံးလိုက်လို့ ရတယ်ဗျ။ ဘာမှ ပြန်ညှိ စရာမလိုဘူး ဆိုဒ်က အံဝင်ခွင်ကျ ကွက်တိပဲဗျ။ ဆိုဒ်အတွက် အုန်းစားပြီး ပြန်ညှိပေးစရာမလိုဘူး။ ခု Ulead မှာ ဆိုတော့
လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကို Edit Mode မှာ ထည့်လိုက်ဗျာ။ အကို စာတန်းထိုးချင်တဲ့နေရာ ကိုရောက်ရင် Pause ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် လက်ရှိ video file ကို select လုပ်ထားပြီး Clip -> Save as Still Image ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီ Pause ပေးထားတဲ့ နေရာရဲ့ image ဖိုင်လေးပေါ်လာပါပြီ။ အဲဒီ ဖိုင်လေးကို အကို ခုနက video နေရာမှာ ကတ်ကြေး နဲ့ ဖြတ်ပြီး အစားထိုးပါ။ ပြီး ရင် စာတန်းထိုးပါ။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ ကျနော် တို့ Image ကြီးထည့်သုံးထားတယ် ဆိုတာ မသိအောင် သေချာ သက်ဝင်အောင် ပျက်ဆက်လိုက်ပါ။ သေချာ ပြန်ဆက်လိုက်မယ် ဆိုရင် အကို လိုချင်တဲ့ အတိုင်း Pause ပေးမယ် ( ခလုတ်နှိပ်စရာမလို ) စာတန်းထိုးမယ် ပြီးဆက်သွားမယ်။ သေချာတော့ Image သုံးတယ် ဆိုတာ မသိအောင် ဆက်လိုက်ပါနော်။ အဲဒါ ဆိုတော်တော် ကောင်းသွားမယ်။ နောက် ပိုင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူများရင် ကျနော်လဲ အချိန်များများပေးနိုင်တာနဲ့ နှစ်ကိုယ်ခွဲ သုံးကိုယ်ခွဲ ( ဓါးနဲ့ မဟုတ်ဘူး ) လုပ်တာလေးပါ ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
ကိုဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ ကိုPaulgyi တို့ တခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ ကလဲ ၀င်ဖြေပေးကြပါလို့ ကျနော် က ညနေဖက်လောက်မှ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တာ ဆိုတော့ သိချင်တဲ့သူ မြန်မြန် သိသွား တတ်သွားတော ဂွတ်ရှယ်ပေါ့ဗျာ
ဇော်ရဲပိုင်, aung myint, boya, lawliet, paulgyi, thetzin, thurein
ကို ဘိုငယ်ရေ....နှစ်ကိုယ်ခွဲ သုံးကိုယ်ခွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ...
ကျွန်တော်လည်း ဟိုစာတန်းထိုးတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပဲ တိုင်ပတ်နေလို့..premiere ကို ခဏနားထားမိသလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ
နောက်ပြီးတော့လေ လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူပုံရဲ့နောက်မှာ background ကို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဗျ....
ဓာတ်ပုံဆိုရင်တော့ ဖျက်ညှပ်ကက်လုပ်လို့ရမယ်..video မှာကျတော့ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဗျ..
15-05-2009, 02:47 AM
သိပ်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို photoshop မှာ လူရုပ်ကြီးသက်သက်ရအောင် ဖျက်လိုက်သလိုမျိုးမလား ကျနော် လဲ အဲဒါ ကိုတော့ ဗီစီဒီ တွေ မှာ တွေ့နေရပေမယ့် မလုပ်တတ်သေးဘူးဗျာ အဆိုတော် ကိုမာရဇ္ဖ ရဲ့သီချင်းထဲမှာ လဲ သုံးထားတယ်။ လူရုပ်ကြီး သက်သက် က လှုပ်ရှားနေတာလေ။ တခြားဟာတွေ ဘာမှမပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် လုပ်ဖူးတာတော့ ရုပ်သေထဲမှာ အရှင် ကို ထည့်သုံးဖူးပါတယ်။ ဥပမာ - ကျနော်တို့ ဂစ်တာ အ၀ိုင်လေးထဲမှာ ကို အမှန်တကယ် ဟဲနေ ဆိုနေတဲ့ video ဖိုင်မျိုးပေါ့။ နောက်ကောက် ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲမှာ အသဲပုံကြီးနဲ့ ရင်ခုန်တာမျိုးတော့ ရတယ်ဗျ။ ကျနော် လဲ ဗီဒီယိုဖိုင် လူရုပ်ကြီးပဲ သက်သက်လှုပ်ရှားနေတာမျိုးကိုတော့ နည်းလမ်းမတွေ့သေးဘူး။ကျနော် လဲ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာ ပါပါတယ်။ အရင်က အားရင် အားသလို မွေးနေ့ အလှူ တွေ လုပ်ပေး တစ်ကိုယ်တော် show လေးတွေ လုပ်နေတော့ လုပ်ဖြစ်တယ်ဗျ။ နည်းလမ်းလဲ ရှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာလဲ ပါမယ် အထီးကျန်ကမ္ဘာထဲ ရောက်နေတော့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင် တရားလေးတွေ နာရင်း စာကိုပဲ အားခဲနေရပါတယ် ။ စားမေးပွဲ အားလုံးပြီးရင်တော့ ကျနော်လဲ ဒီမှာ ပိုစ်လေးတွေ ဆက်တင်ပေးသွားပါမယ်။
ကျေနပ်လောက်တဲ့ အဖြေမပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ကိုဖန်ဆင်းရှင်အနေနဲ့ ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်
ဗီစီဒီမှာ စာတန်းထိုးတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ အမြန်ဆုံးရှာဖွေတွေ့နိုင်ပါစေ ...
Last edited by bonge; 15-05-2009 at 02:52 AM..
ကျွန်တော် တစ်လ ကျော်ကျော်လောက် အချိန်ယူပြီး
ခေါင်းခဲခဲ့တဲ့ VCD စာတန်းထိုးတဲ့ဟာကိုတော့ အခုရသွားပါပြီခင်ဗျာ
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် အဲဒီ software လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
သုံးနည်းကတော့ help ကနေ ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ..အဲဒီမှာ
tool bar အကြောင်းလေးတွေရှင်းပြထားတယ်..ကျွန်တော်လည်း အဲဒါလေးကို
ဖတ်ပြီးတော့ လျှောက်စမ်းကြည့်လိုက်တာ အခုတော့ အိုကေသွားပါပြီ
ဒါပေမယ့် လိုချင်တဲ့အနေအထားအထိတော့ မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာ..
အခက်အခဲရှိရင်လည်း ကျွန်တော်သိသလောက် ဖြေပေးပါ့မယ်..အဲဒီ software
နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့...software အမည်က Power Video Karaoke v1.2.28 ပါခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ဖန်ဆင်းရှင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ကျော်ကြီး, မောင်မောင်လေး, bonge, KoBaKhat, lawliet, paulgyi, stability09, thetzin, tu tu
27-06-2009, 04:00 PM
ကိုဘိုငယ်က ဖိတ်ခေၞအကြံပြုတဲ့ အတွက် ဒီမှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်....
အစကနေအဆုံး soft ware ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ သေသေချာချာလေး သင်ကြားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ....
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ခင်မင်လျှက်.....
ကိုမြင့်မိုရ် ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါ
ကျနော် ပြောလိုတာကတော့ စာတမ်းထိုးတာ soft အမျိုးမျိုးသုံးကြမှာပါပဲ။ အားသန်ရာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာတွေပေါ့နော်။ ကျနော် Premiere အကြောင်းကို ဆွေးနွေးနေတာဆိုတော့ Premiere နဲ့ လဲ ရပါတယ်။ ဒါဆို ဘာတွေ လုပ်ဖို့ လိုမလဲ ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Premiere တင်ပြီး Premiere နဲ့ အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ပါဦးနော်။ ကျနော် ရှေ့မှာ Premiere မှာ Title ဘယ်လို သုံးတယ် ဆိုတာလေးတွေပါပါတယ်။ အခြေခံလေးတွေပေါ့ဗျာ။ အဲဒါလေးတွေ တော့ မဖြစ်မနေသိသင့်ပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် အဲဒါလေးတွေ အရင်ဖတ်ပြီး မှ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ကို ကျနော် အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်နော်။
အကိုပြောတော့ နှစ်ကိုယ်သုံးကိုယ်ခွဲမယ်ဆို ... လုပ်တော့လေဗျာ
ပြီးတော့ ကိုဖန်ဆင်းရှင်ပြောတဲ့ဟာမျိုးလေးလဲ လုပ်ချင်တယ်ဗျာ
အဲဒါမျိုးကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဟင် .... ကျွန်တော်မေးချင်တာတွေများနေလို့ အကိုစာမေးပွဲပြီးမှာကိုစောင့်နေတာဗျ
မတွေ့တာကြာလို့ မေ့သွားကြပြီလားပေါ့ ကျနော် စာအုပ်တစ်ခု ရိုက်တင်နေရလို့ ဒီဖက်မရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ကိုlawliet ကိုလဲ အားပေးမူ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော် တင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်
Premiere ကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ သူတွေက soft တောင်းတော့ ကျနော် ကလဲ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ၂၄ နာရီပဲရတဲ့နေရာကနေ တင်ပြီး link ပေးပေးမယ့် အားလုံးအတွက် အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ခု အားလုံး အတွက် အဆင်ပြေအောင် ဒီမှာပဲ ဖိုင်ဆိုဒ်သေးသေးနဲ့ ခွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
Last edited by bonge; 08-02-2010 at 03:53 AM.. Reason: လင့်ထပ်ဖြည့်
စစ်တွေသားချေ, ဇာနည်မောင်, ဖယောင်း, ဇော်ရဲပိုင်, အောင်ကျော်ဆန်း, မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, ko myo, kyaukphyu, lawliet, nyinyi mt, paulgyi, stability09, thetzin, tu tu
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ လို့ နုတ်ခွန်းဆက်သရင်း ကျနော် ရဲ့ဆွေးနွေးခန်းလေးကို ဆက်ဆွဲလိုက်ကြမယ်ဗျာ ...
Premiere မှာ ကျနော်လုပ်ဖူးသလောက် ကို သာဆွေးနွေး ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား soft တွေနဲ့ လဲ ရမှာပါ။ ကျနော်သုံးဖူးတာနဲ့ ကျနော် လုပ်ဖူးသလောက်ကိုသာ ပြောပြမှာ ဖြစ်လို့ ....
Premiere မှာ အများကြီးရနိုင်ပါတယ်။ Idea ကောင်းသလောက်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ ကိုယ်ခွဲ လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အသက်ဝင်အောင် video camera ရှိရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကျနော် က ဘာကြောင့် video camera ရှိရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတော့ နေရာကွဲနေတဲ့ Position နှစ်ခုကို ဆက်ဖို့ ဆိုရင် ကိုယ်ခွဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်နေပါပြီ
ကျနော် အမြင်ပေါ့ ကိုယ်ခွဲမယ် ဆိုရင် ...
၁။ ပုံသေbackground နှင့် ပုံသေ action
( ကျနော် ဆိုလိုချင်တာ photoshop မှာ background ပေါ်မှာ လှူပ်ရှားမူ့ မရှိတဲ့ image ကို အများကြီး လိုသလောက် ပွါးယူတာမျိုး )
၂။ video backgound ပုံသေ နှင့် ကိုယ်ခွဲ လှုပ်ရှားမူ့
၃။ video background လူရှားမူ့ နှင့် ကိုယ်ခွဲ လှုပ်ရှားမူ့
( ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက ၀င်းဦး ( ၆ ) ကိုယ်ခွဲတို့ ၊ ဂျက်ကီရှန်း နှစ်ကိုယ်ခွဲ တို့ကို ဆိုလိုချင်တာပါ )
အဲဒီထဲက မှ နံပါတ် (၁) ကတော့ phototshop နဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့သူ တော်တော်များများ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ နံပါတ် (၂) ကို ကျနော် ဆွေးနွေးပေးမှာ ဖြစ်ပြီး နံပါတ် (၃) ကိုတော့ ကျနော် မစွမ်းနိုင်ပါ
ပထမဦးဆုံး video camera နဲ့ ကိုယ်ရိုက်မယ့်နေရာကို ပုံသေချိန်ထားလိုက်ပါ။ နှစ်ကိုယ်ခွဲမယ်ဆိုရင် လူနှစ်ယောက်စာပေါ့။ သုံးကိုယ်ခွဲမယ်ဆိုရင် လူသုံးယောက်စာပေါ့။ အဲလို ပုံသေချိန်ထားပြီး နေရာ ယူကြည့်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အားလုံးပါရဲ့ လားပေါ့။ ဆက်မယ့်နေရာလေးကို ပိုင်းကြည့်ထားလိုက်ပါ။ ဥပမာ - ဆိုကြပါစို့ အခန်းတစ်ခန်း မှာ ချိန်ထားတယ်ဆိုရင် ညာဖက်နဲ့ ဘယ်ဖက်ပေါ့။ စိတ်ထဲကနေ (သို့) အမှတ်အသားတစ်ခုနဲ့ အလယ်မှာ ပိုင်းထားစေချင်တာက အဲဒီ ကျနော်တို့ ပိုင်းထားတာကို မကျော်မိအောင်လို့ပါ။ တကယ်မလို့ ကျော်မိသွားရင် နှစ်ယောက်ထပ်သွားပြီလေ။ တစ်ပိုင်းချင်းစီရိုက်ပြီး ဆက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ background တစ်ခုတည်းကို ပုံသေထားပြီး action နှစ်ယောက် လုပ်မှာဆိုတော့လေ။
အဲတော့ - ပထမတစ်ခါရိုက်တဲ့ အခါ ညာဖက်က လူက ပုံစံတစ်မျိုး နဲ့ လှုပ်ရှားမယ်ပေါ့။ ဥပမာ - သီချင်းတစ်ပုဒ်စာ လုပ်မယ်ဆိုရင် သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖွင့်ပြီး အဲဒီ သီချင်း ဆုံးတဲ့ထိအောင်ပေါ့။
- နောက်တစ်ခေါက်လည်း သူပဲလေ ညာဖက်မှာ ၀တ်စားထားတာနဲ့ မတူညီတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယဉ်မူ့နဲ့ ဘယ်ဖက်မှာ နေရာယူပြီး ခုနကလို့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ဆုံးတဲ့ ထိအောင် action လုပ်မယ်ပေါ့။
- သတိထားရမှာကတော့ နှစ်ယောက်လုံးက ကျနော်တို့ ဆက်မယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလယ်မျဉ်းကို မကျော်ကြဖို့ နဲ့ ကင်မရာ position မပြောင်းသွားဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
အဲလို ဆိုတော့ ကျနော်တို့ video ဖိုင် ပုံစံနှစ်ခု ရလာမယ်ပေါ့နော်။ ပထမက ညာဖက်ကနေ သရုပ်ဆောင်တာ ဒုတိယကတော့ ဘယ်ဖက်ကနေ သရုပ်ဆောင်တာ ပုံသေ Background နဲ့ Action နှစ်မျိုးရလာပါပြီ။ အဲဒီ ဖိုင်တွေ ဆက်ဖို့ နောက်နေ့မှပဲ ကျနော် ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။
နားရော လည်မလားတော့ မသိဘူးဗျ ကျနော်လဲ ရှင်းတတ်သလို ရှင်းတာဆိုတော့လေ။ နာမလည်ရင်တော့ အားမနာတမ်း မေးခွန်းတွေ မေးနိုင်ပါတယ် ဗျာ။ ကျနော် သိသလောက် ဖြေပေးပါမယ်
မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, aung myint, paulgyi, thurein, zo
ခု လို့ တတ်တတ်ကြွကြွနဲ့ လုပ်နေတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ပြန်စာ နောက်ကျ သွားတဲ့ အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ
ဒါနဲ့ အကို မေးတာ သိပ်သဘောမပေါက်ဘူးဗျာ။ နမူနာလေးနဲ့ ကျနော်ကို ပြောကြည့်ပေးပါလား။ မျက်လုံးထဲမှာ ပုံဖော်လို့ မရဘူးဗျာ။ ကျနော်ကလဲ ဝေးတယ်ဗျာ
ဥပမာ- ကျနော် လုပ်ဖူးတာနဲ့ ပုံဖော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်။ ဂစ်တာမှာ အလယ်ဝိုင်းပါတဲ့ ဂစ်တာရှိတယ် မလား။ ကျနော် မခေါ်တတ်ဘူးဗျ အဲဒီ ဂစ်တာပုံကို အ၀ိုင်းလေးကို Photoshop နဲ့ ဖောက်ပြီး အဲဒီ အ၀ိုင်းကနေ Aciton Video တွေ ပြလို့ရပါတယ်။ ဂစ်တာကတော့ Image ကြီးပေါ့နော်။ ဂလိုများလား
ကျနော်ပြောတဲ့ ပုံစံမဟုတ်ရင် ထပ်မေးပေးပါဗျာ။ ခွေရိုက်ဖို့ အဆင့်တွေ Menu ဖောက်ဖို့ လိုတာတွေပါ ကျနော်ပြောသွားမှာပါ။ မေးတာကြာပြီ အားနာလိုက်တာ ရော့ရော့ ကော်ဖီလေးသောက်သွားပါဦး။ ကျော်ခွ လာကြတဲ့သူတွေ တွေ့နေရတော့ အဲလို လာရတာဆိုရင် မောနေမှာ ဆိုးလို့ ပါ
တော်တော် သံယောဇဉ်ရှိကြပါတယ်ဗျာ။ ကျော်ဂွ ကြရပေမယ့် မိသားစုကိုတော့ ရောက်အောင် လာကြပါတယ်။ ကျော်ဂွပြီး ရောက်အောင် လာကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးကို ဒီနေရာကနေ လေးစာပါတယ်လို့
20-07-2009, 04:56 PM
အဲလို ဂစ်တာ ပုံကို ဖောက်တော့ ဘာ ဖော်မက်နဲ့ ပရီးမီးယားကို ပို့တာလည်း ဗျ ။ အားရင်လည်း ပုံလေးနဲ့တကွ
ရှင်းပြပါလား အစ်ကို ကျေးဇူးဘဲနော်
အဲ ကော်ဖီကောင်းလို့ အားရှိသွားပြီဗျိုး
မေးပြီ နော် ဖြေဖို့သာပြင်ပေတော့
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ ပုံစံ က တစ်ချို့လေ အနောက်ကဘက်ဂရောင်းက ကာတွန်းပုံ လေ
အဲဒီကာတွန်းပုံထဲမှာ ထိုင်ခုံပါမယ်ဗျာ အဲဒီထိုင်ခုံပေါ်မှာ လူတွေကထိုင်ပြီး ဂစ်တာတီးနေတဲ့ပုံတွေလိုမျိူးလေဗျာ
အဲလိုအဲလို .... တစ်ချို့ vcd တွေထဲမှာရိုက်သလိုမျိုးလေးပါ
အနော်က လူကို ဂစ်တာထဲထည့်တော့ဝူးဗျ အပြင်ကိုပါထွက်ခိုင်းလိုက်တာ
ကို paulgyi ...
ဟုတ်ကဲ့။ အရင်ဆုံး ဂစ်တာပုံက အ၀ိုင်း ကို Photoshop နဲဖြတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ PSD Format နဲ့ သိမ်းခဲ့ပေးပါ။ Premiere ကိုဖွင့်ပါ။ File -> Import (Ctrl+I) နဲ့ ခုနက PSD ဖိုင်ကို ရွေးပေးပါ။ အောက်မှာ ပုံလေး ပေါ်လာပါမယ်။
အဲဒီကနေ ကျန်တာတွေ ဘာမှ မပြောင်းပဲ Choose Layer ကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးရင် Video track ထဲကို ထည့်ကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ photoshop မှာ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပါတယ်။
Video Track 1 မှာ ကလေးလေးတွေ ပုံထည့်ထားပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ video ဖိုင်တွေ လဲ ထည့်လို့ ရပါမယ်။ ကျနော် ဂစ်တာကြီးရဲ့ အလယ်မှာ ကြိုးတွေ ပြတ်နေလိမ့်မယ် ကျနော် ဖြတ်ရမှာ ပျင်းနေလို့ ဗျာ
Last edited by bonge; 21-07-2009 at 12:22 AM..
ရမ်းဖြီးကြည့်မယ် အင်းဗျ။ စိတ်ကူးတော့ ကောင်းသားပဲဗျာ အကို ပြောတဲ့ ပုံစံကို ဖော်ကြည့်အုန်းမယ်ဗျာ
နောက်က ကာတွန်းပုံ ဆိုတာက Image ထိုင်ခုံ ပေါ်မှာ လှုပ်ရှားလူက တတ်ထိုင်ပြီး တီးနေတာ ဂလိုလား လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူသက်သက်ကြီး ကို ဖျက်ပြီး နောက်က ကာတွန်းပုံထဲက ထိုင်ခုံမှာ ပေးထိုင်ချင်တာနဲ့ တူမယ်ဗျ အဆိုတော် မရဇ္ဇ သီချင်းထဲကလို ဖြစ်မယ်။
video ဖိုင်ကြီးကို နောက်က background တွေမပါ Photoshop မှာ လို ဖြတ်ဖို့ကတော့ ကျနော်လဲ မသိဘူးဗျ တစ်နည်းတော့ ရှိတယ်။ Photoshop နဲ့ပဲ Image ပုံပေါ်ကို Image လူက ထိုင် (သို့) အပြင်မှာ အဲလို ထိုင်နေတာကို ရိုက်ရင်တော့ ရနိုင်ပါတယ်
Premiere ထဲမှာ အဲလိုဖြတ်ဖို့ ပါတော့ပါတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် Photoshop မှာ လို background မယူပဲ Layer ကြီးပဲ ရအောင်တော့ ဖြတ်လို့ မရဘူးဗျ။ ကျနော် မသိတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ
လူက ဂစ်တာ အပြင်ရောက်နေမှတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး တီးလိုက်ပါတော့လားဗျာ
Last edited by bonge; 21-07-2009 at 12:40 AM..
26-08-2009, 05:20 AM
They asking me for serial numbers.
Last edited by tu tu; 29-11-2009 at 12:43 AM.. Reason: edit quote
26-08-2009, 08:31 AM
အဲဒီဖိုင်တွေကို စုပြီးဖြည်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီထဲမှာပဲ keygen ပါပါတယ်။ အဲဒီ keygen ကိုနှိပ်ရင် serial number ပေါ်ပါတယ်။ Activate လုပ်တာ အဆင်ပြေသွားအောင် အောက်က video ဖိုင်လေးကို ကြည့်ပြီး လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ ...
Premiere 2.0 Activate
Last edited by bonge; 26-08-2009 at 08:33 AM..
ဇော်ရဲပိုင်, ဖြိုးယံလေး, konaung, zo
28-08-2009, 09:14 PM
Thank you Ko Bonge,
But I can't watch the video ,cause it is not clear to me.
Can you show me how to install step by step?
I got the serial key now but the request code.
ကို tzero ခင်ဗျာ ...
ပြန်စာနောက်ကျသွားတာကို စိတ်မရှိပါနဲ့ ခင်ဗျာ ဧည့်သည်တွေ ရောက်နေလို့ နောက်ကျသွားတယ်ဗျာ
အကို အဆင်ပြေအောင် ကျနော် အောက်မှာ အသေးစိတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ပြောပြသွားပါမယ်
အောက်ကပုံကတော့ setup ဖိုင်ကို ရွေးပြီး run ပါမယ်
အဆင်မပြေတာ အောက်ကပုံမှာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် keygen ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ Serial Number ဆိုပြီးတွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ key တွေကို ကူးပြီး လက်ရှိတောင်းနေတဲ့ နေရာကို ထည့်ပေးပါ ခင်ဗျာ။
ပြီးတာနဲ့ Next ပါပဲခင်ဗျာ
Load နေတုန်းမှာပဲ အောက်ကပုံမှာ လို့ Activate လုပ်ဖို့ ပြောလာပါလိမ့်မယ်။ အဲလို ပြောလာရင် Activate ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
အပေါ်က ပုံမှာ Other activation option ဆိုပြီး ရွေးခဲ့လဲ ရပါတယ်။ ကျနော်က ရူပ်နေမှာ ဆိုလို့ အောက်က ပုံပေါ်လာတာနဲ့ Phone Activation ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
အောက်ပုံက အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Keygen ကိုပြန်ဖွင့်ပေးပါအုန်း။ Serial နံပါတ်က ကျနော်တို့ ပထမဆုံးဖြည့်ခဲ့တာ ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ Phone Activation ထဲမှာ Activation Number ဆိုပြီးသူပေးထားတာရှိပါတယ်။ နောက်က အကွက်တွေထဲမှာ။ အဲဒီ အကွက်တွေထဲက နံပါတ်တွေ ကို ကူးပြီး Keygen ထဲက Request Code နေရာမှာ ထည့်ပေးပါ။ အဲလို ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် Keygen မှာ Response code ဆိုတာပေါ်လာပါမယ်။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီ ပေါ်လာတဲ့ ကုတ်ကိုပဲ ကူးပြီး
3. When you are told the Authorization Code, enter it here: ဆိုတဲ့ အောက်က အကွက်လေးတွေ ထဲကို ဖြည့်ပေးပါ။ အဲလို မှန်ကန်စွာကျနော် ပြောသလို သေချာဖတ်ပြီး ဖြည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Activate ကိုနှိပ်ပေးပါ။
စိတ်ဝင်စားမူ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank You !
ခု ကျနော် ရှင်းပြထားတဲ့ ဖိုင်ကို အောက်မှာ ရယူသွားနိုင်ပါတယ်။
အဆင်ပြေပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ ...
Last edited by bonge; 03-09-2009 at 04:23 AM..
စစ်တွေသားချေ, မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, aung myint, thetzin, thurein, tu tu, zo
အဆင်ပြေသွ၁းပြီဗျ၁။ အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ulead မှာပါဘယ်လိုလုပ်ရလဲပါပြောပေးပါဗျိုး
premiere ကျွန်တော့စက်က သုံးလို့မရလို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ lawliet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခု ကျွန်တော် အခက်တွေ့နေတာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ
အဲဒါက pdf ဖိုင်တွေကို ဗီဒီယို လုပ်တာ စာတွေက တော်တော်ကို ဝါးနေလို့
ဗျ ... အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပါဦး
ပြန်စာနောက်ကျသွားတာ စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ။ report တစ်ခုလုပ်နေရလို့ ဗျာ
တခြားသိချင်တဲ့သူတွေပါ သိအောင် ဒီမှာ ပဲဖြေလိုက်ပါတယ်နော် စာဖိုင်တွေကို video လုပ်ရတာ တော်တော် အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စာဖိုင်တွေက pixel မလိုက်နိုင်တဲ့ အခါဝါးသွားပါတယ်။ အဲဒါကို ကျနော် အဆင်ပြေတဲ့နည်းကတော့ CamStudio လေးနဲ့ Record လုပ်ပီး video ဖိုင်ထုတ်ပီး Ulead မှာ သုံးကြည့်ပါဗျာ။ အဲဒီနည်းလဲ ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူး။ ကြည်ပါတယ်။
ဒီ soft ကိုသုံးကြည့်ပါ။
CamStudio ( 1.3 MB )
အဲဒါကတော့ အကိုအနေနဲ့ အဆင်မပြေတာရှိရင် ulead မှာ ဘယ်လို အဆင်မပြေဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ဒီမှာ ပဲ မေးခွန်းထားခဲ့လိုက်လေ။ ကျနော် ကြိုးစားဖြေပေးပါမယ်။ ဟိုလိုကြီးတော့ သင်ရိုးတစ်ခု ပုံစံမျိုး မရေးနိုင်သေးဘူးဗျာ။ ကျနော်လဲ ရေးချင်ပါတယ်။ ခုလောလောဆယ် စာလုပ်နေရလို့ ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးပါဗျာ
စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ရှိနေသမျှကျနော် ရေးဖြစ်နေမှာပါ
Last edited by bonge; 13-09-2009 at 04:25 AM..
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဖိုးထိန်, ဖြိုးယံလေး, ko myo, yawnathan
ကျွန်တော်လည်း လိုက်လုပ်နေပါတယ် အစ်ကိုရယ်။ အစအခက်အခဲ့တွေနဲ့ပဲ တိုင်ပတ်နေတာ။ အခုတော့ အစ်ကို ဒီလို့ ပို့လုပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့လို့ နယ်က ငနွားတွေအတွက် အဆင်ကို ပြေလို့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကိုတို့ရယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ waihunaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, thetzin, yawnathan
Find More Posts by waihunaung
အကိုတို့ရယ် ကျတော်သိချင်တာက DVD ကို Playလိုက်တဲ့အချိန်မှာ English Channel တစ်ခု Chinese Channel ကိုကြိုက်တာကို ပြောင်းကြည့်လို့ရတယ် အဲဒါကို Adobe Premier 1.5 မှာ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ သိချင်လို့ပါDVD လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Audio Channel ကို
မေးခွန်းကိုတော့ ကျနော်သိပ်နားမရှင်းဘူးဗျ ကျနော်ကဝေးနေတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ မတွေးတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ DVD လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ Audio Channel ကို Eng to Chinese ကို အသံပြောင်းသွားတာမျိူးလား
တစ်ခုတော့ ကျနော် ပြောပေးလိုက်မယ်ဗျာ။ Effect -> Audio Effect အောက် Audio နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Effect တွေ နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ့လားဗျာ။ အထင်ကြီးမနေနဲ့ အုန်း ကျနော်လဲ အရမ်းတတ်ဘူးဗျ အဆင်မပြေရင် သေချာ အသေးစိတ် ထပ်မေးပေးပါဗျာ။ ကျနော် ကြိုးစားကြည့်ပါအုန်းမယ်
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဇော်ရဲပိုင်, thetzin